Paositra: Ny safidy Sendgrid izay tokony andramantsika rehetra | Avy amin'ny Linux
Mihabetsaka hatrany ny fampiasan'ny orinasa ny mpizara mailaka azy ireo ary ny fampiharana mailaka marketing, izaho manokana mino fa ny iray amin'ireo fitaovana mety indrindra amin'ny fanatanterahana ireo asa ireo dia Sendgrid, saingy indrisy fa irery ihany izy io. ny solon'ny Sendgrid izay notsapaiko nandritra ny roa andro dia paositra, mpizara mailaka loharano misokatra miaraka amina endri-javatra mahaliana izay azo apetraka mora foana amin'ny mpizara tranonkala anay.
1 Inona ny atao hoe paositra?
2 Ahoana ny fametrahana paositra?
3 Fehiny momba ny Paositra
Inona ny atao hoe paositra?
paositra dia fitaovana open source, novolavolain'ny ekipa an'ny Ruby, Php ary Node aTech Media ary izany dia ahafahantsika manana mpizara mailaka misy endri-javatra be dia be amin'ny sehatra rehetra na mpizara tranonkala.
Ity fitaovana ity dia safidy tsara indrindra SendGrid, Mailgun na koa ny kely laza Paositra, noforonina tany am-boalohany mba handrakofana ny filàna fototra an'ny ekipa aTech saingy navotsotra mba hampiasain'ny mpampiasa rehetra.
Ny fitaovana dia manana interface tsara dia tsara ary efa notsapaina nandritra ny 6 volana mahery, manana afo tsotra ihany koa izy io hahafahantsika mandefa sy mandray mailaka kokoa.
Pikantsary isan-karazany amin'ny fampiharana azo antoka fa hanome fanazavana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny toetran'ity mpizara mailaka loharano misokatra tsara ity.
Ahoana ny fametrahana paositra?
Alohan'ny hametrahana ny paositra dia mila manana Ruby, MySQL, RabbitMQ, Node.js ary git isika, avy eo dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika:
Mamorona tahiry mifandraika aminy ary amboary izy amin'ny fiasan'ny paositra
Tsy maintsy mamorona tahiry fandefasana paositra izahay, tsy maintsy soloinao ny ip eo an-toerana an'ny mpizara anao ary koa ny XXX miaraka amin'ny teny miafina tianao.
MANANGANA banky angona `paositra`CHARSET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
GRANT ALL ON `paositra`.* TO `paositra`@`127.0.0.1` FANTATSIN'NY "XXX";
Avelao ny mpampiasa manokana hanana fidirana amin'ny tahiry prefixed rehetra postal-.
GRANT PRIVILEGES REHETRA ON `Karatra paositra-%` . * ny `paositra`@`%`  FANTATSIN'NY "XXX";
Mamorona mpampiantrano virtoaly RabbitMQ miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Omano ny distro hitondranao zip
Mametraha fiankinan-doha roa ilaina ary tetikasa vitsivitsy no mila:
Cloneo ny kaody loharano ao amin'ny lahatahiry mety miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Azontsika atao ny mamorona rohy an'ohatra mba hidirana amin'ny paositra avy amin'ny lahatahiry, miaraka amin'ity baiko manaraka ity
Ampidiro ireo fiankinan-doha Ruby izay mila hazakazaka amin'ny paositra.
Mihazakazaha ny fametrahana voalohany ny fitaovana miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Atombohy aloha ny tahirim-paositra ary soraty ny fametrahana anao mba hanana https:
Ny fisoratana anarana ny lakilenay ahafahana manao encrypt
Alefaso ny mpizara paositra anao ary manomboka mankafiza:
Fehiny momba ny Paositra
Raha izaho manokana dia mieritreritra aho fa ny Postal dia fitaovana mety hanolo ny serivisy rahona izay manome endrika mitovy amin'izany, satria manome antsika fifehezana bebe kokoa sy fitantanana mahafinaritra kokoa ny mombamomba antsika. Mazava ho azy fa ny Pos dia manana ny fatiantoka sy ny tombony noho ny vahaolana tompona na maimaim-poana hafa, noho izany ny famakafakana ny toe-javatra misy antsika dia mety hamaritana raha mety amin'ny fampiasana antsika izany.
Toy izany koa, ny làlan'ny fianarana Post dia somary fohy ihany, ka amin'ny tontolo voafehy, dia azo atao ny manome fitsapana azo ekena amin'ny fampiasana sy fampiasana ilay fitaovana.
Zava-dehibe ny hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fananana sehatra mailaka loharano maivana, azo antoka ary misokatra, fa ny tena zava-dehibe dia ny maka fotoana ampy hisafidianana ny rindranasa mifanaraka amin'ny zavatra ilainao indrindra. Izaho manokana dia mihevitra an'io fitaovana vaovao io ho safidy hafa amin'ny Sendgrid izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilaiko, noho izany dia atoroko azy io ary manomboka anio dia ho milahatra ho an'ny tontolon'ny famokarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Paositra: Ny safidy Sendgrid izay tokony hiezahan'ny tsirairay
Carlos Mauricio dia hoy izy:
Tena mahaliana ny lahatsoratrao, milahatra mba hitsapana azy.
Fantatrao ve misy safidy rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Slack?
Valiny tamin'i Carlos Mauricio